Dhowrsonaanta Qofka Muslimka Ah. Sheekh Maxamed Ismaaciil - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Dhowrsonaanta Qofka Muslimka Ah. Sheekh Maxamed Ismaaciil
Ku soo dhawaada oo ka bogta muuqaalkan kooban ee barnaamijka Midhaha Diintu idiinku talo galay. Wuxuuna ku saabsan yahay dhowrsonaanta qofka muslimka ah. Waxa soo jeedinaya sheekh Maxamed Sheekh Ismaaciil. Waxa muuqaalka duubay Baraarug Media.